HAPPY BIRTHDAY DAW AUNG SAN SUU KYI (AMAY SUU) | democracy for burma
tags: AMAY SUU, Burma, Daw Aung San Suu Kyi, Happy Birthday, Myanmar, NLD
NIK NAYMAN သစတြေးလျနိုင်ငံ၌ ကျင်းပသော ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၈) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွင် မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ဂုဏ်ပြုခြင်း။လေးစားရပါသော မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် …….ယနေ့ မင်္ဂလာရှိသော ရက်မြတ်အခါသမယမှာ မွေးနေ့ ရှင် ကျန်းမာရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲဘန်းမြို့ နေ မြန်မာမိသားစုများ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများမှ ဦးစွာ ပထမ နှုတ်ခွန်းဆက် မေတ္တာပို့ သအပ်ပါတယ်။ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းသည် မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်သည်ဆိုသော (၃၈) ဖြာမင်္ဂလာတရားတော်နှင့် အညီ မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ယနေ့ အချိန်အခါသမယတွင် ကျွန်တော်တို့သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲဘန်းမြို့ နေ မြန်မာမိသားစုများ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများမှ ဂုဏ်ပြုခွင့်ရရှိသည့်အတွက် ၀မ်းသာကြည်နူး ဖြစ်ရပါတယ်။မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကျင်းပခြင်းနှင့်အတူ မွေးနေ့ ရှင်ဟာ အထူးဂုဏ်ပြုထိုက်သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ပြုထိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများနဲ့ဖေါ်ကျူးပြောကြားလိုပါတယ်။မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၅) နှစ်တိုင်ကတည်းက ယခုအချိန်အခါအထိ မိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုး မိသားစုအကျိုးကို စွန့် လွှတ်ပြီး အကျဉ်းအကြပ် အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းပြီး၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုးအတွက် အနစ်နာခံစွန်လွှတ်မှုပေါင်း မြောက်မြားစွာနဲ့ အတူ ပေးဆပ်နေပြီး၊ ပြည်သူပြည်သားများအပေါ် မေတ္တာဂရုဏာရှင်ပီသစွာ ကျောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုကာ တိုင်းပြည်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ လူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ မြင့်မားစေတဲ့ အံ့မခန်းဖွယ် နာရီပိုင်း အချိန်ပိုင်းနှင့်အမျှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့များစွာ ဂုဏ်ပြုထိုက်စေသော အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။စွန့် လွှတ်အနစ်နာခံခြင်း၊ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ မေတ္တတရားထားရှိခြင်းတင်မက သူတစ်ပါးနှင့်အတူ ထူးခြားတောက်ပြောင်သော အရည်အချင်းပြည့်ဝမှု ကိုယ်ကျင့်တရားစောင့်ထိန်းမှု ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှု ပညာဥာဏ်စွမ်းကြီးမားမှု အမျှော်အမြင်ကြီးမားမှု ငြိမ်းချမ်းမှုကို အစဉ်ရှေ့ မှုမှု တရားမျှတမှုကို လိုလားကြိုးစားအားထုတ်မှု ခွင့်လွှတ်ကြင်နာ နားလည်မှု၊ မိခင်နှင့်သားသမီးသဖွယ် ပြည်သူပြည်သားများအပေါ် ရင်ဝယ်သားလို နွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံမှု အစရှိတဲ့ မြင့်မြတ်သော ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များကို ပြည်စုံသူ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ခေါင်းဆောင်မြတ်တစ်ဦး ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ သစ္စာ မေတ္တာ ဂရုဏာ ပညာ စသည့် အရည်အသွေး အရည်အချင်းများနဲ့ပြည့်ဝသူဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအတွက် များစွာ ဂုဏ်ယူထိုက် ဂုဏ်ပြုထိုက် အားကိုးထိုက်သော ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ယခုလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် – မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို နှစ်ထောင်အားရကျေနပ်စွာနဲ့ကျင်းပပြီး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဂုဏ်ပြုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားများအတွက် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအသွင်ဖြင့် တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲအောင်သာ ကြံဆောင်ကြရန် သဘောထားမပြောင်းသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သည်မှာ ထိုက်တန်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့သော အခြေအနေနဲ့ ဇွဲသတ္တိကို “ဘဲအုပ်က တစ်ရာနှစ်ရာ မဗေဒါက တစ်ပင်တည်း၊ အယက်အကန်ခံလို့ ဗေဒါပျံ အံကိုခဲ ပန်းပန်လျှက်ပဲ” ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာနဲ့ တင်စားဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ယခုလက်ရှိမှာလည်း မဗေဒါ အံကိုခဲကာ အားမန်အပြည့်နဲ့အခက်အခဲမှန်သမျှကို ကြံ့ ကြံ့ ခံ ရင်ဆိုင်နေပြီး ပန်းပန်လျက်နေဆဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေအနေနဲ့တွေ့ မြင်နေဆဲ ဂုဏ်ယူနေဆဲပါ။
ယနေ့ အခြေအနေမှာလည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးစဉ်တွေမှာ မြန်မာပြည်သူ ကမ္ဘာပြည်သူအားလုံးဟာ တခဲနက် တက်တက်ကြွကြွ ပူပေါင်း ပါဝင်ကြိုဆိုနေကြတာကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ ဗေဒါပင်လေးတပင် မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ မြန်မာ့ကောင်းကင်မှာသာမက ကမ္ဘာကောင်းကင်မှာပါ ထိန်လင်းသွားလောက်အောင် ကြယ်အပေါင်း ခြံရံထားတဲ့ လပြည့်ဝန်းကြီးလို့တောင် တင်စားဆိုနိုင်လောက်ပါတယ်။
မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားမှုနဲ့ အတူ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့တူညီသော ရင်တွင်းဆန္ဒများကို မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။
မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မျှော်မှန်းချက် ရည်မှန်းချက်တွေကို ၀ိုင်းဝန်းအားဖြည့်ပေးဖို့စိတ်၏ ခွန်အား ကိုယ်၏ စွမ်းပကားနဲ့အမြဲထာဝရ ပံ့ပိုးဝိုင်းရံ လက်တွဲဆောင်ရွက်ပေးကြမယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်။
မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပေါ် တိုက်တွန်းချက်ဖြစ်တဲ့
“ပြည်သူတွေအနေနဲ့ တာဝန်ယူတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိမှ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကို ပြည်သူက ချုပ်ကိုင်လို့ရမှာ ဖြစ်တယ်” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားမှုကို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့နားလည်စွာနဲ့မိမိတို့ပြည်သူများအနေနဲ့အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်သောပြည်သူ့ အစိုးရနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားစေဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြပါမယ်ဆိုတာကိုလည်း လေးနက်စွာ ပြောကြားလိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုတာကတော့ မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မျှော်မှန်းတဲ့ အမိမြန်မာနိုင်ငံ အေးချမ်းသာယာပြီး ရဟန်းရှင်လူတိုင်းသူပြည်သား နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြကာ ဘေးဘယာဝေးကွာ လုံခြုံမှု ပြည့်ဝသော ဘ၀များ အလျင်အမြန် ရရှိကြပါစေ … မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင် ပြည့်ဝပြီး အသက်ရာကျော် ရှည်ပြီး လိုရာဆန္ဒတိုင်း မဆိုင်းမတွဘဲ အလျင်အမြန် ရရှိပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါတယ်။
မကြာခင် ကျရောက်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ကာလ၏ ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာ တိုင်းပြည်ဦးသျှောင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ် မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မြင်တွေ့ ရပါစေ …. မွေးနေ့ ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အထူးမျှော်မှန်းတဲ့ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ် တရားမျှတစွာ မင်းကောင်မင်းမြတ်တို့ ရဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပိုင်ခွင့်ကို ဧကန်မလွဲ ရရှိပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့အထူးဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲဘန်းမြို့ နေ မြန်မာမိသားစုများ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ။
PHOTO NIK NAYMAN
Happy Birthday to you Daw Aung San Su Kyi.
← ALERT!အထူးအရေးပေါ် အသိပေး ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်_Myanmar Nationalistic Social Network Committee, Malaysia
BREAKING NEWS “ ရင်နာလွန်းလို့ ပါဗျာ ” →